आजदेखि नयाँ नोट साट्न शुरु, यस्तो छ ब्यवस्था ? - सुनाखरी न्युज
आजदेखि नयाँ नोट साट्न शुरु, यस्तो छ ब्यवस्था ?
Posted on: September 20, 2021 - 11:53 am
दशैंका लागि आजदेखि नयाँ नोट साट्न शुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसबाट बच्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउँदै सर्वसाधरणका लागि नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सर्वसाधरणका लागि ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट सटही गर्ने तयारी गरेको छ । जसमध्ये १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म ५, १०, २०, ५० र १ सय रुपैयाँको नोटहरु वितरण गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
बैंकहरुले प्रधान कार्यालय वा अन्य तोकिएका कार्यालयहरुबाट नयाँ नोट सटहीको सुविधा दिनेछन् । राष्ट्र बैंकले भने आजदेखि बालुवाटार कार्यालय र प्रदेशस्थित ७ वटै प्रदेशका प्रादेशिक कार्यालयहरुबाट नयाँ नोट वितरण हुने कार्यकारी निर्देशक नेपालले जानकारी दिए । यसका अलवा केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु समेतले नयाँ नोट लगिसकेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले नयाँ नोट वितरण हुनेछ ।
हरेक वर्ष दशैंमा नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले गत वर्ष कोरोनाका कारण राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गरेको थिएन । यस वर्ष कोरोना संक्रमण निकै घटेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गर्न लागेको हो ।
ब्याजदर घटाउन बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको ‘अल्टिमेटम’, शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव
एन आई सी एशिया बैंकको सर्वाधिक फाइदाले भरिपूर्ण “सर्वश्रेष्ठ बचत तथा मुद्दती खाता” योजना सार्वजनिक
ब्याजदर घटाउन बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको ‘अल्टिमेटम’, शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा
ब्याजदरको प्रतिस्पर्धामा राष्ट्र बैंकको लगाम,यस्तो छ परीपत्र